ᐈ Lords Mobile Mejores Monstruitos ❤️ 2021
emelitere ikpeazụ Oct 20, 2020
Lords Mobile bụ egwuregwu vidio nwere ọrụ na-enweghị ngwụcha, dịka ịchịkọta ihe iji wuo ụlọ, ọbụnadị na-achọ ihe ndị nwere ike inyere gị aka n'ọtụtụ ọrụ.
Bụ otu n'ime egwuregwu vidio ndị kachasị ewu ewu na nyiwe ya maka ọkwa dị egwu, egwuregwu ndị na-atọ ụtọ na ihe odide dị egwu, Lords Mobile na-enye anyị ihe na-adọrọ mmasị maka ọtụtụ. Ndị a bụ nnukwu anụ ahụ, isiokwu anyị maka isiokwu ị na-agụ.
Obere nnukwu anụ ga-abụ nnukwu ihe enyemaka iji mezuo ebumnobi gị n'alaeze ahụ: debe guild gị ma bụrụ eze na Lords Mobile. Naanị ị ga-aghọta usoro ha ma mepee ozi ndị dị mkpa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya!
Kedu ka m ga-esi nweta nnukwu anụ Lords Mobile?
Monsters bụ ihe e kere eke na ị pụrụ nanị inweta site na-emecha Agha 8 na-ewu ụlọ anọ. Buildingslọ ndị a bụ: Monster Domain, Mystic Spire, mgbatị, n’ikpeazụ Fuente.
Mgbe ị mechara owuwu nke ụlọ ndị a, ị nwere ike ịmalite iji usoro Monster na Lords Mobile ma nweta ọtụtụ i nwere ike.
Nkwado ikpeazụ anyị ga-enye gị bụ ka ị bulie ụlọ ndị a ruo n'ọkwa kachasị elu.
Kedu ihe bụ nnukwu anụ Lords Mobile
Monmụ obere anụ nwere ikike dị iche iche nwere ike inyere gị aka n'ọgbọ agha. Ha na-arụ ọrụ dị ka ezigbo nkwado mgbe ịchọrọ onye ga-akpọtụrụ gị. Ọ bụ ya mere anụ ọhịa usoro bụ otu n'ime ihe ndị kasị fun na bara uru na eluigwe na ala nke Lords Mobile
Morefọdụ ndị na-ewu ewu karịa ndị ọzọ n'ihi ike ha nwere, ụmụ obere anụ kacha mma nwere ike depụta na ndepụta. Anyị ga-egosi gị ya ugbu a.
Already nwere ndepụta nke anụ kacha mma na Lords Mobile! Yabụ na ọ ga - ezu naanị ịbụ ezigbo onye nhazi na ụdọ n'ọgbọ agha iji nwee ike mezuo ebumnuche anyị niile chọrọ: idobe guild anyị na ịbụ onye isi egwuregwu ahụ.
Anyị na-atụ anya na isiokwu a bara ezigbo uru maka njem gị n’ụwa nke Lords Mobile nakwa na a gbara gị ume ịgụ ndị ọzọ. Anyị ga-ewetara gị ezigbo ngwaọrụ maka nke na-esote. Ugbu a ịlụ agha!
Otu esi emeghe agwa ndi mmadu Genshin Impact
Ighaghachi nkume na ihe osise nke Vermeer Genshin Impact